Asa famoronana amin'ny andron'ny mpiasa iraisam-pirenena | Famoronana an-tserasera
Asa famoronana amin'ny andron'ny mpiasa iraisam-pirenena
Androany 1 mey no ankalazaina ao efa ho ny tsirairay amin'ny Andron'ny mpiasa iraisam-pirenena. Andro fitsaharana ho azy rehetra ho fanajana ny fitantanana azy mandritra ny ambiny. Misy mpiasa an-tapitrisany izay mamoaka ny sarin'izy ireo amin'ny andro fialantsasatra sy mankafy ny fotoana malalaka ananany. Voalohany indrindra, miarahaba anao! Androany isika dia hijery ny asa famoronana amin'ity taonjato ity sy ny ho avy.
Ireo asa ireo no be mpampiasa indrindra atsy ho atsy. Noho ny haitao izay tantananay anio dia ity karazan'asa ity no be mpampiasa indrindra amin'ny androntsika araka ny Gazety University Cambridge.
1 Being YouTuber
3 Tsy ho very ny tontolon'ny lalao video
4 Mpamorona lamaody
Na dia ny volan'ny olona sasany noho ny fahaizan'ny youtubers amin'ny antonony sy maharitra dia manimba, ny hafa kosa mihevitra marina fa ho iray amin'ireo asa amin'ny ho avy io. Miova ny sehatra youtube. Nefa tsy maintsy jerenao ihany koa ny isan'ny mpiasa ao amin'ny YouTube. Amin'ny tsy fisian'ny fanamafisana ireo fotodrafitrasa sy fitarihana votoaty mahazatra kokoa (tratra nandritra ny taona maro niasan'ireo mpiasa ireo). Mety ho orinasa ho an'ny mpihaino rehetra izany. Mazava ho azy, ny doka sy ny haino aman-jery dia tsy maintsy mivoatra amin'ny sehatra.
Ny olona sasany, na any Espaina, na any ivelany dia efa miaina izany. Ary tsy mahagaga raha tsy mora mihintsy ny mifindra Olona iray tapitrisa 26 toy ny ataonao, ohatra, Rubius. Izany rehetra izany, ankoatr'izay, 'tsy miala ao an-trano'.
Mitohy amin'ny fiafarana vaovao «-ER nalaina avy amin'ny teny anglisy, dia asa iray hafa izay manangona fironana. Ny Creativos Online dia mety ho ohatra amin'izany, bilaogy iray mahomby hahatratra olona maro ary tohanan'ny dokambarotra izany. Ity asa tamin'ny taonjato fahiraika amby roapolo ity dia mitaky fangatahana hatrany. Ary raha tsy mijery bilaogy mahazatra fotsiny isika dia afaka mahita fa misy ny bilaogin-tsary (Instagramers).
Na dia mety miteraka fahalianana aza ny bilaogy rehetra ankehitriny, dia maro ireo mafana. Ao amin'ny bilaogy Actualidad dia misy toerana maro izay mahaliana be toy ny Recetín, Actualidad Motor, Actualidad Iphone ary mazava ho azy, Famoronana an-tserasera.
Tsy ho very ny tontolon'ny lalao video
Raha mbola tsy nilalao lalao video ianao dia midika izany fa very tany anaty ala ianao farafaharatsiny. Isan'andro, avy amin'ny sehatra rehetra, mahita mpilalao amin'ny karazana lalao isika. Bebe kokoa izao, rehefa manome lalao lalao marobe ny lalao irery. Manomboka amin'ny fanoratana ka hatramin'ny firesahana mafy amin'ny fahavalo.
Lojika ny mieritreritra fa amin'ny ho avy dia ity no asa na iray amin'izy ireo, lehibe kokoa ary angatahin'ireo taranaka vaovao. Ary ny iray amin'izy ireo dia Video Game Tester. Zavatra iray ho nofinofisin'ny maro, ny fitsapana lalao video dia tsy inona fa ny fanamarinana fa mahafeno ny fepetra takiana ny lalao video. Amin'ny ambaratonga sary, tantara, Multiplayer sns. Ny Tester no ho tompon'andraikitra amin'ny fanombanana fa mandeha amin'ny tsena amin'ny vokatra tsara indrindra ity vokatra ity.
Raha liana amin'ity asa ity ianao, ary te hahafantatra bebe kokoa momba ny fizotran'ny lalao video, dia misy kariera mikendry ny hampiofana ireo matihanina amin'ity sehatra ity. Ny sasany amin'izy ireo dia ny University Degree in Animation ary ny Master in Design and Development avy amin'ny Playstation First.
Na dia efa manana ny fotoanany aza ity asa ity, ny fahitana ny sary ankehitriny, dia toa misy dikany bebe kokoa noho ny hatramin'izay. Talohan'io dia asa ho an'ny sangany ara-toekarena. Fa ankehitriny, amin'ny fampiasana media sosialy sy fananahana ny atiny dia demokratika. Eto ianao dia tsy maintsy mampivelatra famoronana be dia be, satria raha ny marina dia tsy miankina amin'ny tsiro manokana. Io no teboka sarotra indrindra amin'ny fifaninanana. Eto raha tsy maintsy ataonao fa mahavariana tokoa ianao.
Farafaharatsiny izany no ahafantarana azy ao amin'ny izao tontolo izao. Izy ireo koa dia azo fantarina ho mpihaza fironana ary ny tanjon'izy ireo dia ny hanao faminaniana momba ny fanovana na ny fisehoan'ny kolontsain'ny mpanjifa sy ny lamaody. Ny coolhunter dia ambonin'izany rehetra izany, mpikaroka ara-tsosialy, izay handinika sy hanontany ny manodidina azy hanandrana haminavina ny fomba hiovan'ny zavatra atsy ho atsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Asa famoronana amin'ny andron'ny mpiasa iraisam-pirenena
Mena sy manga, loko roa izay hahatonga anao hamorona sy ho manan-tsaina kokoa
Ny fomba nanentanana azy ireo hamorona maherifo